သင်ရော ဘယ်လိုထင်မြင်သလဲ – The Only Way To Go!
Posted on February 24, 2012 February 24, 2012 by barnay
လူဟာ ……… တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေစဉ်မှာတောင် ကိုယ်လုပ်နေတာတွေကို တစ်ယောက်ယောက်က ကြည့်နေသလိုမျိုး စိတ်ထဲ ရှိနေတတ်ပြီး ညင်ညင်သာသာ ကျကျနန ပြုမူတတ်တယ် ။ အဲ့ဒီလို ပြုမူလိုက်ပြီးရင်လည်း ကျေနပ်နေတတ်ပြန်တယ် ။
လူဟာ ………. တစ်ခုခုလုပ်နေချိန်မှာ ထိုလုပ်ရပ်ဟာ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ တခြားသူအမြင်ကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်တတ်ပြန်တယ် ။
လူဟာ ………… တခြားတစ်ယောက်က မင်းလုပ်တာ မကောင်းဘူး ဘယ်လိုကြီးဆိုပြီး အပြစ်ပုံစံမျိုး ဝေဖန်တာမျိုးဆိုရင် မိမိလုပ်တာတွေ ဘယ်လိုရှိရှိ ထိုပြောချက်အောက်မှာ စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုး မကျေနပ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ် ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကျေနပ်ခြင်း မကျေနပ်ခြင်းဟာ ထိုလူတစ်ယောက်မှာသာ ရှိပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျေနပ်ခြင်းက တခြားသူဆီမှာ မရှိပါဘူး ။ ဒါကို ခွဲခြားသိဖို့လိုပါတယ် ။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်က ဝေဖန်ချက်များကို ကျော်လွှားဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ထားဖို့လိုပါတယ် ။ တကယ်တော့ စိတ်ချမ်းသာခြင်းဟာ သူများဆီမှာ မရှိပါဘူး ။ ကိုယ့်နှလုံးသားအတွင်းစိတ်မှာသာ ရှိတာပါ ။
လူဟာ ………. တပါးသူရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်တွေ အပြစ်ပြောချက်တွေကို ယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ၊ စိတ်ချမ်းသာမှု ကို အလိုမကျခြင်း ရွှံနွံထဲ မြုပ်ပစ်တတ်လေ့ ရှိပါတယ် ။
လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်ချမ်းသာခြင်း ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟာ စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်ပါပဲ ။ယခုလက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ချမ်းသာ ကျေနပ်မှု ကို ကိုယ့်စိတ်အတွင်းမှာ ပြုကြည့်လိုက်ပါ ။ ဒါဟာ လွယ်ကူသော စိတ်ချမ်းသာနည်းတစ်ခုပါပဲ ။
ဖြစ်ပျက်မှုပေါင်း အားလုံးထဲကနေ အပေါင်း တွေကိုပဲ ရွေးမြင်လိုက်ပါ ။ အနုတ်တွေဆိုတာက အပေါင်းတွေရဲ့မြင့်မြတ်မှုအတွက် မပါမဖြစ်ပါနေရတာမို့ အမြဲရှိနေမှာပါ ။ ကျောက်စိမ်း တန်ဖိုးမြင့်နေဖို့အတွက် ကျောက်ခဲများ ရှိနေရတယ်လို့ မြင်ကြည့်လိုက်ပါ ။ ဒီတော့ အနုတ် ရလဒ်ဟာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနိုင်တယ် ။ အနုတ်ရလဒ်တွေကို သင့်မြင်ကွင်းကနေ ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပါတယ် ။
လူတိုင်းမှာ စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက် အသားလွတ်မဖြစ်နိုင်တာမို့ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကို မြင်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မြင်ကြည့်တယ်ဆိုရာမှာ မိမိအတွက် အများအတွက် ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းကျိုး အနည်းငယ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရှာလို့ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန် ထိုအပြုအမူအတွက် အပြုံး တစ်ခုကို သင့်မျက်နှာမှာ မရှက်မကြောက်သာ ပြုံးနေလိုက်ပါ ။
အပြုံးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေဟာ အသားလွတ် ပြုံးရမှာ ဝန်လေးတတ်ကြပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆို တဖက်လူရဲ့ အမြင်ကို ဂရုစိုက်နေတတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့်လို့ ဆိုချင်ပါတယ် ။
ကျေနပ်စရာ ၊ ပြုံးစရာ ရှာမရတဲ့အခါ တစ်ခုသော အကြောင်းကို သတိပြုလိုက်ပါ ။ အဲ့ဒါက ကိုယ်ဟာ လူသားဖြစ်နေလို့ ဆိုတာပါပဲ ။ ခုလို အသိဥာဏ် ရှိရှိနဲ့ မိမိဘဝကို ယှဉ်ပြီး သုံးသတ်တတ်တာဟာ တော်တော် အားရ ကျေနပ်စရာပါ ။ ဒီတော့ လူဖြစ်ရပြီး အသိဥာဏ် ရှိနေခြင်း ကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ ။
သက်ရှိတိုင်းဟာ ဝိဥာဉ် တစ်ခုစီ ရှိပါတယ် ။ ထို သက်ရှိတိုင်းမှာလည်း ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ကျင်လည်နေရတဲ့ အသိလေးတွေ ရှိကြတယ် ။ အဲ့ဒီသက်ရှိတွေနဲ့ နှိုင်းစာရင် ကိုယ်ဟာ လူအဖြစ်မို့ နှိုင်းဆလို့မရအောင် သာနေပြန်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီထက် ပိုနေတာက လူလူခြင်းတူနေတာတောင် ခုလို စဉ်းစားမှု မပြုသူတွေထက် သာတယ်ဆိုတာပါပဲ ။ နောက်ထပ် ဒီထက် ပိုကောင်းတာမျိုးတွေကို လုပ်မယ်လို့ စိတ်ထဲရှိနေတာကလည်း ကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပေပဲမို့ ကိုယ်ဟာ ကံကောင်းနေတဲ့သူ ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒီတော့ ယခုလို မိမိဘဝအတွက် အားရ ကျေနပ်ခြင်း ကို ကြည့်ခွင့် ရှိနေတုန်း မြင်အောင်ကြည့်လိုက်စေချင်ပါတယ် ။
တခါတခါ မိမိမှာ စိတ်ညစ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ စိတ်ချမ်းသာစေသော အကြောင်းများကို ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါ ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သင်ဟာ အဖိုးတန် လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အလိုလို သိလာပါလိမ့်မယ် ။
မကောင်းဘူးဟု မိမိအမြင်ဖြင့် သိနေသော အလုပ်မျိုး ၊ အပြုအမူမျိုး မလုပ်မိအောင် ထိန်းသိမ်းပါ ။ ဒါဆိုရင် သင်ဟာ တိုးတက် ပြောင်းလဲ လာနေသော လူတစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ ။
အသိရှိနေသော လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်ခုခုမလုပ်ခင် မိမိအသိမှာ ကောင်းတာလား ၊ ဆိုးတာလား ဆိုတာတွေကို အလိုလို ခွဲခြားသိနေတတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ မိမိအနေဖြင့် စင်ကြယ်သော ရွေးချယ်မှု ကိုသာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြုမူဖို့လိုတာပါ။
မိမိမှာရှိတဲ့ အကျိုးရှိစေမဲ့ သိခြင်း ၊ တတ်ခြင်းကို ဖော်ပြနေတာထက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးချခြင်းက မွန်မြတ်ပါပေတယ် ။ အသိအမှတ်ပြုတာ မပြုတာထက် အသုံးတည့်နေခြင်းက မွန်မြတ်မှုပါပဲ ။ ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်တည် ရှိ ဖော်ပြ နေပါစေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ဘယ်လို အဆင့်အတန်းရှိတဲ့သူလဲဆိုတာ လူတိုင်း သိနေပါတယ် ။
( နောက်များမှ ဆက်ရေးပါမည် )
၂၄ရက် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ ၂၀၁၂
Posted in လူငယျတိုးတကျရေးTagged အတှေးအမွငျ
8 thoughts on “သင်ရော ဘယ်လိုထင်မြင်သလဲ”
တကယ်တော့ စိတ်ချမ်းသာခြင်းဟာ သူများဆီမှာ မရှိပါဘူး ။ ကိုယ့်နှလုံးသားအတွင်းစိတ်မှာသာ ရှိတာပါ ။
တခါတခါ မိမိမှာ စိတ်ညစ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ စိတ်ချမ်းသာစေသော အကြောင်းများကို ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါ ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သင်ဟာ အဖိုးတန် လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အလိုလို သိလာပါလိမ့်မယ်
ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်တည် ရှိ ဖော်ပြ နေပါစေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ဘယ်လို အဆင့်အတန်းရှိတဲ့သူလဲဆိုတာ လူတိုင်း သိနေပါတယ် ။
These are my thinking….:)
Yeah! You are great , My friend .
တခါတရံ စိတ်ချမ်းသာမှုကို အမှန်တကယ် ကိုယ်က အလို ၇ှိပေမယ့်
ကိုယ့် ကို စိတ်ဆင်း၇ဲ မှုကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွေးတွေနဲ့အဲလို လူတွေ အကြောင်းကို ဘဲ
တ၀ဲလည်လည် ပြန်တွေးနေ၊ပြန်တွေ့ နေမိတော့ တယ်……သိသိကြီးနဲ့ ..မေ၇ှာင်လွဲနိုင်သေးခင်ပေါ့..
တကယ်တမ်းကိုယ့် စိတ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးမိတဲ့ အခါကျမှသာ……….လုံးဝကြီး ကို
အဲလို အတွေးတွေကို ကိုယ့် ရဲ့ဖြူစင်ကြည်လင်နေတဲ့ စိတ်ထဲ ကို အ၀င်မခံတော့ တာပါ။…
ဘာနေေ၇းတဲ့ စာတိုင်း မှာ…စေတနာက …ေ၇ာင်ပြန်ဟပ်ပြီး ….စာဖတ်သူတွေကို တခုခု ပေးနေဆဲ ဘဲ မို့ 
ကျေးဇူးတင်၇င်းနဲ့ ……..
ကျေး …. ဇူး .. တင် …ပါ… တယ် … ။
ကျွန်တော် အကိုစာတွေဖတ်ပီး အားတက်လာတယ်ဗျာ…နောက်လဲရေးပေးပါအုန်း အကိုဘာနေ
ကျနော်ရေးတာကို ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ .. အတွေးချင်းတူလို့ နေမှာပေါ့ဗျာ .. ကျနော်တော့ အဲ့လိုပဲ ယူဆမိပါတယ် .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လာဖတ်ဖြစ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ
အတွေးလေးကအရမ်းကောင်းပါတယ်။စိတ်ညစ်နေလိုဝင်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တာ။ ဒါလေးကို ရှယ်ခွင့်ပေးပါ။့
ရှယ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါဗျာ .. အသိပညာသို့မဟုတ် အနည်းငယ်ကို မျှဝေခြင်းက မွန်မြတ်ခြင်းပါပဲ .